Search Project Optimization dia tsy tetikasa
Asabotsy 5 Febroary 2011 Douglas Karr
Indraindray isika dia manana fanantenana manantona anay ary mangataka aminay mba hametraka teny nalaina tamin'ny tetikasa momba ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ry vahoaka, ny fanatsarana ny motera fikarohana dia tsy tetikasa. Tsy ezaka azonao atao akory ny mamita satria manafika tanjona kendrena ianao. Miova amin'ny fikarohana ny zava-drehetra:
Ny motera fikarohana dia manitsy ny algorithman'izy ireo - Google dia tsy mitsahatra manitsy mba hitazomana mialoha ny spamme ary, ny farany, ny fambolena atiny. Ny fahafantarana ny fomba fampisehoana ny atiny rehefa misy ireo fanovana ireo dia afaka manatsara ny vokatrao. Ny fandeferana dia mety halevina amin'ny tranokalanao. Mazava ho azy fa tsy dia mahery vaika izany, fa mahita fiovana mitranga amin'ny mpanjifanay izahay.
Manitsy ny paikadin'ny motera fikarohana ireo mpifaninana aminao - Ny fifaninanana ataonao dia manova ny tranokalany ary mety misy mpanolo-tsaina SEO manampy azy ireo koa. Raha miorina mafy ianao ary mahazo tambiny lehibe amin'ny fampiasam-bola, fotoana kely fotsiny io dia manomboka mampiasa vola amin'ny paikady ny fifaninanana misy anao.
Niova ny paikadin'ny orinasa, ny vokatra ary ny serivisy - Ny fomba mampiavaka ny orinasanao amin'ny fifaninanana dia miova matetika rehefa mandeha ny fotoana, mihakely na mamolavola endri-javatra, vokatra ary serivisy vaovao ianao. Mila manaraka an'io ny fanatsarana fikarohana nataonao.
Ny fanovana teny fanalahidy - Indraindray, ireo teny izay hokarohan'ireo mpampiasa dia miova ihany koa rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra, fampiharana, sehatra, ary rindrambaiko samy hafa ny haben'ny karoka amin'ny sehatry ny teknolojia. Na dia mety hampiasaina mitovy amin'izany daholo aza izy ireo, dia niova ny lazan'izy ireo rehefa nandeha ny fotoana.
Niova ny volan'ny karoka - Fotoanan'ny andro, andro amin'ny herinandro, fiovana isam-bolana sy fizaran-taona dia misy fiantraikany amin'ny fikarohana rehetra. Ny fandefasan-kafatrao sy ny atiny dia mety mila manitsy mba hipetraka.
Miova ny teknolojia amin'ny sehatra - Hitanay ireo tranonkala mahafinaritra sasany izay nanjavona saika tamin'ny valin'ny fikarohana hatramin'ny naha-izy azy ireo Ny CMS dia tsy voatsara na mifandray amin'ny motera fikarohana. Raha manana CMS taloha ianao izay mbola tsy nohavaozina, mety ho very ny fahafaha-manararaotra mivezivezy amin'ny motera fikarohana ianao.
Miova ny tranokala mifandraika - Inona no tranokala malaza indrindra teo amin'ny indostriao izay mety tsy intsony… miova ny fahefan'ny tranonkala amin'ny fotoana rehetra. Ny fahazoana antoka fa hampiroborobo ny tranokalanao amin'ny tranonkala ambony dia hitombo hatrany ny lazan'ny tranokalanao sy ny laharanao.
Ny fananana mpanolo-tsaina na famandrihana mitohy miaraka amina mpamatsy SEO lehibe dia hanome ny orinasa tamberim-bola tsara raha misy ny fangatahana fikarohana. Raha manana loharanon-karena anatiny ny orinasanao hiasa amin'ny fikarohana, famandrihana SEOmoz or gShiftLabs miaraka amin'ny fitaovana fanaraha-maso sasany dia mendrika ny fampiasam-bola.
Rehefa afaka maharaka ireo fanovana ireo ny mpanjifanay dia manohy mahita ny fiverenan'ny fitomboan'ny fampiasam-bola izahay, mitohy mihena ny vidiny isaky ny mitarika ary afaka manararaotra mitady tanteraka ny fahazoana mpanjifa vaovao izy ireo. Mila fanaraha-maso sy fanatsarana tsy tapaka anefa izany. Raha angatahan'ny orinasa SEO manana orinasam-pampianarana mahazatra ny orinasanao ka hanatsara ny tranokalanao amin'ny sarany voafaritra izy ireo ary handeha, dia mety te-handinika indray ny fampiasam-bola ianao.
Tags: valin'ny orinasaCokehoronantsary famerenana ny mpanjifa
Febroary 5, 2011 amin'ny 11:02 PM
Febroary 5, 2011 amin'ny 11:47 PM
10 Feb 2011 tamin'ny 12:05 maraina
Mar 2, 2011 amin'ny 11: 14 AM
Jun 24, 2013 ao amin'ny 10: 40 PM
Jun 26, 2013 ao amin'ny 9: 27 PM